Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Lucas Digne Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan ee lagu yaqaan naaneyska “Luca”. Sheekadeena Lucas Digne Childhood oo lagu daray Untold Biography Xaqiiqooyinka waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskiisa, noloshiisa shaqsiyeed, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee yar ee la yaqaan.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay kartidiisa uu ku dhibaateyn karo kuwa wax weerara si uu ugaarsado haysashada Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa tixgeliya Lucas Digne's Biography kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilaabno.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Gadaal-bidix Lucas Digne wuxuu ku dhashay maalinta 20th ee July 1993 at Meaux commune in France. Wuxuu ahaa kii labaad ee laba carruur ah oo u dhashay hooyadiis, Karine Digne iyo aabihiis, Philippe Digne.
Lucas Digne wuxuu ku dhashay waalidiinta oo wax yar laga ogyahay. Astaanta Sawirka: Kubadda cagta Faransiiska
Muwaadin Faransiis ah oo ka mid ah ciyaartoyga qowmiyadaha caddaanka ah ee leh xididdada muuqaalka leh ayaa lagu soo barbaaray Meaux ee France halkaas oo uu kula soo koray walaalkiis ka weyn - Mathieu Digne.
Lucas Digne waxaa lagu soo koray Meaux commune ee France. Astaanta Sawirka: Kubadda cagta Faransiiska iyo WorldAtlas.
Isagoo ku koray dhulkiisii ​​hooyo ee Meaux France, Digne wuxuu ku socday jidkii walaalkiis ka weyn Mathieu isagoo ciyaaray kubad aad u naxariis badan. Intii Digne ay ahayd, wuxuu si aan caadi ahayn u sheegay qofkasta oo daryeela inuu dhagaysto inuu noqon doono xirfadle ku xeel dheer isboortiga oo leh qaab wanaagsan oo guriga ku gaadhsiin kara hadafkiisa.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Markii uu yaraa Digne wuxuu ku koray dherer iyo da ', danaha uu ka leeyahay kubada cagta wuxuu noqday mid wareer ah. Nasiib wanaagse, isdiiwaangalinta naadiga maxalliga ah ee Mareuil-Sur-Ourcq ayaa siisay fursad ku filan oo uu ku helo khibrad kubbadda cagta isla markaana ugu muhiimsan, kahadalkiisa ku saabsan xirfadiisa.
Waqtigii Digne uu da 'ahaan jiray 9 ee 2002, wuxuu ku biiray naadiga deriska ah, Crepy-en-Valois halkaas oo uusan ku fiicneyn kaliya xirfadaha laga soo qaatay 3 sano ee tababarka ee Mareuil-Sur-Ourcq laakiin wuxuu weli u furan yahay barashada aasaasiga dheeraad ah.
Kaarka aqoonsiga Lucas Digne ee Crepy-en-Valois. Astaanta Sawirka: Kubadda cagta Faransiiska.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Nolosha Mudnaanta Hore
Markii ugu sarreysay ee kubbadda cagta Digne uu la cayaaro Crepy-en-Valois, wuxuu ku adkaaday inuu iska indhatiro madaama timahiisa oo qurux badan dhalaalaya ay noqdeen nooc calaamadeeyayaal ah oo indha indheeyayaal ka socda Lille oo raadinaya booskiisa cajiibka ah inta lagu jiro ciyaaraha tartamada.
Sidaas darteed, 12-sano jir caan ah oo kubada cagta ah ayaa la keenay nidaamka dhalinyarada ee Lille halkaasoo uu kaga soo baxay darajooyinka sanadihii 5 si uu ugu danbeyn u xaqiijiyo u dallacsiinta kooxda koowaad ee kooxda. Wuxuu sii waday inuu saxiixo qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed ee kooxda Faransiiska bishii Luulyo 2010.
Lucas Digne wuxuu u ciyaaray Lille xirfadle ahaan. Astaanta Sawirka: FMS.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Waddada loogu talagalay sheekada
Dhanka Digne, Lille kama aysan badnayn dhulkii taranka maadaama uu diirada saarayay sidii loo fulin lahaa riyadiisii ​​caruurnimo ee u ciyaarista Paris Saint Germain. Horumarinta ayaa sharxaya sida dhaqsaha leh loogu dhaqaaqo "naadiga riyada" ee 2013 ka dib markii uu laba xilli ciyaareed ku qaatay Lille.
PSG ayaa Lucas Digne kala soo saxiixatay Lille 2013. Astaanta Sawirka: Sportskeeda.
Intii uu joogay PSG, Digne wuxuu umuuqday waqti inuu ku dhaafo kuraasta. Waligiis fursad uma helin inuu naftiisa ka dhiso kooxda halkaas oo laga dhigay ciyaaryahan kayd ah markii uu yimid oo uu ku bartay inuu noqdo badal aan la isticmaalin badiyaa kulamada muhiimka ah ee kooxdiisa riyadiisa. Si uu dhamaan u xirto, waxaa amaah loogu siiyay Roma xilli ciyaareedkii 2015 / 2016 ka dib markii uu kaliya labo sano la qaatay Parisians-ka.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Sare u qaado sheekada
In kasta oo Digne uu hal sano ku soo qaatay Roma, hadana u soo muuqashadiisa kooxda ayaa ka sarreysay wixii uu ku duubay PSG labo xilli ciyaareed, ma aheyn looma tixgelin inuu ku soo barbaaray Barcelona halkaasoo uu ugu dhaqaaqay 2016 isla markaana uu labo xilli ciyaareed kula soo ciyaaray kooxo waa weyn sida. Lionel Messi.
Horumar degdeg ah ilaa maanta, Digne wuxuu u ciyaaraa kooxda Everton FC kadib markii uu kooxda u saxeexay 2018. Shaki iigama jiro inuu ku faraxsan yahay kooxda Ingariiska halkaasoo uu ku diiwaan galiyay goolasha ugu badan mustaqbalkiisa waqtiga qorista. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Lucas Digne ayaa ku jira qaab ciyaareedkiisa gooldhalinta fiican ee Everton. Sawirka Sawirka: Galbeedka.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Xaqiiqooyinka nolosha qofka
Kicitaanka Digne ee safka hore ee Lille ayaa weli ah mid muhiim u ah isaga sanado badan, gaar ahaan xaqiiqda ah inuu la kulmay saaxiibtiis - Tiziri Digne muddadii. Jacaylkii jacaylka ahaa ee labaduba ahaa 16 sano jir markii ay kulmayeen kulankoodii ugu horreeyay, waxay noqdeen lammaane isqaraami kara oo sii waday inay guursadaan bishii Diseembar 2014.
Lucas Digne iyo afadiisu waxay bilaabeen sidii caruusad qaali ah. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Tziri waxaa ka mid ah waxyaabo kale oo xiiseeya jimicsiga iyo kuwa xiisaha leh ee rajeynaya inay dhisaan mustaqbal shaqo joornaaliisnimo. Waxay dhowaan dhashey cunuggoodii ugu horreeyay (wiil) bishii Abriil 2019 si ay qoyska ula socodsiiyaan adduunka cusub.
Digne iyo Tiziri waxay wada dhaleen ilmahooda ugu horreeyay bishii Abriil 2019. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Xaqiiqooyinka Nolosha Qoyska
Marka laga tago taakulo adag, calaamad ku dhawaad ​​iyo bannaanka loo maro Toffees, qoysku muhiimad weyn ayey u leeyihiin Digne. Waxaan kugu soconnaa nolosha qoyskiisa.
Ku saabsan Lucas Digne aabaha: Philippe waa aabaha Digne. Wuxuu ka soo shaqeeyay guri daabicis ah oo ku yaal Lizy-Sur-Ourcq oo u dhow Meaux inta lagu jiray noloshiisii ​​Digne wuxuuna sidoo kale u soo ciyaaray kooxdii ugu horreysay ee naadiga bidix ee naadiga Mareuil-Sur-Ocrcq. Isaga oo aan sheegin in uu wax weyn ku soo kordhiyay qaabeynta sarakiisha Digne ee kubada cagta waxa uuna door muhiim ah ka ciyaaray horumarkiisa ilaa iyo maanta.
Ku saabsan Lucas Digne hooyada: Karine waa hooyadeed Digne. Sida ninkeeda iyo wiilashoodaba, waxay ku weyn tahay kubada cagta waxayna mar ahaan jirtay xoghayihii naadiga 'wiilasha' Digne ee Mareuil-Sur-Ocrcq. Hooyada jacaylka leh ee labada caruus waxay il gaar ah ku haysaa wiilasheeda gaar ahaan Digne oo dhawaan guriga u soo saartay wiilkeedii ugu dambeeyay.
Lucas Digne waxaa soo korsaday waalid aan waxbadan laga aqoonin. Credits Image: ClipArtStation iyo FotballWikia.
Ku saabsan Lucas Digne walaalaha: Digne wuxuu leeyahay walaal la yiraahdo Mathieu. Walaalkii ka weynaa ee isna la wadaaga sheeko carruurnimo Digne sidoo kale mustaqbalkiisa ku dhisayay Lille laakiin xirfad uma uusan celin. Si kastaba ha noqotee, waligiis ma joogsan inuu taageero Digne oo ka go'an inuu magac wanaagsan u yeesho qoyska kubbadda cagta.
Ku saabsan Lucas Digne qaraabada: Digne wuxuu leeyahay awoowe hooyada iyo ayeeyada oo aan wali la aqoon halka ay jiraan diiwaanada adeeradiisa, adeeradooda adeeradooda iyo adeerkood. Sidoo kale, ilma-adeeryada bidix ee bidix wali lama cadeynin gaar ahaan dhacdooyinka noloshiisa hore ilaa maanta.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Haa, Digne waxay leedahay muuqaal aad u weyn dareenka maxkamadda, waa shaqsigiisa shaqsiisa qalbiga qof kasta oo kulan la leh. Astaamaha shakhsiyadda quruxda badan ee Digne ee asal ahaan ka soo jeeda astaamaha cudurka kansarka ee 'Cancer zodiac' waxaa ka mid ah dhalashadiisa himilo, soo bandhigid sirdoon shucuureed iyo deganaan la'aan.
Waxyaabaha uu xiiseeyo iyo waxyaabaha uu xiiseeyo waxaa ka mid ah daawashada, dhageysiga muusikada gaar ahaan R&B iyo Rap. Digne sidoo kale waxay sii wadataa ciyaaraha teniska iyo kubbadda koleyga sidoo kale waxay la qaadataa waqti fiican qoysaska iyo saaxiibada.
Daawashada araggu waa mid ka mid ah danaha Lucas Digne. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Qiimo suuq ah oo ah € 30 milyan waqtiga qoritaanka oo ay weheliso ku dhawaad ​​toban sano oo khibrad ah oo kubada cagta ah ayaa lagu aasaasay Digne horyaalnimada mushaharka qaata mushahar aad u sareeya.
Wuxuu ku nool yahay qaab nololeed raaxo leh kaasoo had iyo jeer lagu muujiyo qaab noloshiisa, guryo iyo sidoo kale dhadhan qaali ah oo ku saabsan hoyga marka uu ka ciyaarayo meel ka baxsan horyaalka Faransiiska. Malaha inta ugu badan ee la soo qabqabto ayaa ah gawaaridiisa gawaarida oo ay ku yaalliin magacyada Ferrari, Mercedes iyo Audi.
Lucas Digne wuxuu soo jeedinayaa mid ka mid ah gawaaridiisii ​​Audi. Astaanta Sawirka: Wtfoot.
Lucas Digne Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyin Bixin La'aaneed - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Shakinta iyo ogaalku maahan isku mid. Fadlan ka hel xaqiiqooyin aan aad loo aqoon ama ka warqabin oo ku saabsan Lucas Digne.
Sigaar cabidda iyo cabbitaanka: Digne taariikh kuma lahan sigaarka, lamana siinayo inuu wax cabbo waqtiga qorista. Wuxuuse ku dadaalayaa inuu caafimaad wanaagsan helo oo uu ku mashquulo wax kasta oo xaddidi kara waxqabadkiisa.
Tattoos: Wuxuu leeyahay tattoos caan ku ah gacmihiisa iyo kelmadaha muranka dhaliyay (Weligey Kuma Waligi Doono ') feeraha mar loo marin habaabiyey inuu yahay jaceylka uu u qabo Liverpool. Dejinta rikoorka tooska ah ee arrinta, Digne wuxuu sharraxay inay u tahay abaalmarin waalidkiis.
Lucas Digne tattoo tattoo wuxuu akhriyaa “Waligeey ma socon doono kali”. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Balanqaad caalami ah Daafaca bidix ee bidix wuxuu u ciyaaraa xulka qaranka France wuxuuna matalay dhammaan qeybaha ay ka kooban yihiin U16 illaa heerarka U21. Wuxuu u soo ciyaaray France intii lagu jiray 2014 koobkii adduunka wuxuuna diyaar u ahaa xulka Faransiiska koobkii adduunka ee 2018 FIFA.
Diinta: Wax badan lagama ogain mowqifka Digne ee arrimaha iimaanka, si kastaba ha noqotee, wuxuu siinayaa midab in uu noqdo rumaystaha isaga oo iskutallaabta uga gudba goobta ciyaarta. Dhaqanka noocan ahi wuxuu caan ku yahay dadka Masiixiyiinta ah gaar ahaan Katooliga.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay Akhrintayada Lucas Digne Childhood Story iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Lille OSC Kubadda Caanka
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Paul Gascoigne Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 18, 2020
Rikoorka Caruurta Hore ee Sheeko Xogta Wanaagsan
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 21, 2020